Sida loo dayactir Common iCloud nidaameed Arrimaha?
1.When aadan saxiixi karin In To Your iCloud
2.When Your Phone Kanu sow ma aha Backing Ilaa iCloud ayaa
3.When ma aad kala bixi karto iCloud?
4.Why iCloud Photos Kanu sow ma aha syncing?
5.Why iCloud ayan soo celin kara kaabta The?
Inta badan dadka isticmaala Apple si weyn ugu tiirsan adeegyada ay iCloud sida uu yahay hab aad u wanaagsan in ay sii xogta ay xoojiyaa oo aad leedahay bakhaar ah u kaydiyo faylasha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax badan oo arrimaha u hagaagsan oo aad la kulmi kartid oo halkan waxaan doonayaa in aan qaar ka mid ah arrimaha u hagaagsan wax caadi ah oo badan oo dadka isticmaala Apple ayaa marar badan cabasho ka qaban.
Qaybta 1aad Marka aan Waxaad isku diiwaan gelin kartaa in aad iCloud
Haddii aadan awoodin inay la soo wareegto in aad iCloud aad telefoon, waxaa jiri kara sababo kala duwan ee isku. Tallaabada ugu horreysa waa in uu sheego dhibaatada ka dibna raadi xal.
Ka dib markii qaar ka mid ah talooyin aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso.
Hubi in ay fure u capslock aan la gagadin.
Jeeg Double labada aad magacaaga iyo isgarad-aad password
Haddii aad leedahay laba talaabo sugida karti, hubi in aad si sax ah u geli furaha ah oo loo diray qalab aad.
Haddii mid ka mid ahaa shuqulladan oo aad u soo xasuusatid sirta ku fashilmaan, waxaad dooran kartaa in ay dib, isagoo raacaya tallaabooyinka.
1. Tag aan id Apple adigoo gujinaya halkan
2. Dooro inteeda kale aad link password
3. in la keeneen in doonaa inaad gasho id Apple ah. Gala isla markaana sii.
4. Hadda, waxaa jira saddex siyaabood by kaas oo aad ka bedeli kartaa sirta.
a. Waxaad isticmaali kartaa 'ka jawaab su'aasha ammaanka' ka dibna raac tilmaamaha la joojiyo oo sirta ah.
b. Waxaad isticmaali kartaa 'email sugida' kuna waari dhexdeeda waxaa laguu soo diri doonaa tilmaamo ku saabsan email iyo in aad dib karaan sirta ah.
c. Waxaad isticmaali kartaa 'laba tallaabo xaqiijinta' in ay sidoo kale dib.
Part 2 Marka Phone Kanu sow ma aha Backing Ilaa iCloud ayaa
Badanaa, raad raac ah ee xogta si aad u iCloud waa si toos ah, laakiin waxaa dhici karta marar kala duwan sababo kala duwan. Waxa ay noqon kartaa la'aanta la xidhiidha internet ama xitaa la'aan meel lagu kaydiyo. Xaaladaha noocaas ah, waxaad dooran kartaa xalka soo socda.
1. iPhone aan la taageeray karo, maxaa yeelay, ma jiro kaydinta ku filan laga heli karaa
Haddii aad hesho fariin this; waxaa loola jeedaa in aad daalan aad meel lagu kaydiyo iCloud. Waa in aad kala cadeeyo qaar ka mid ah macluumaadka iCloud by takhalusaya files aan la rabin oo isku day mar kale in ay dib u up. Sidoo kale, waxaad sidoo kale boos dheeraad ah ka iibsan kartaa.
Si aad u tirtirto files ka iCloud, u tag goobaha iyo iCloud ah. Hadda dhaqaaqo kaydinta ka dibna riix on maamuli kaydinta. Tirto faylasha aad rabto in ay nadiifiso intii lagu badbaadinayo.
2. Hubi xiriir Wi-Fi
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aad iPhone ma taageerto kor u content wuxuu noqon karaa dhibaato ee la xiriira Wi-Fi. Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso in aad telefoonka xiran yahay, oo shidan iyo sidoo kale ku xiran si aad Wi-Fi. Waxa uu u suurtogelin doonaa auto gurmad in server daruurtii.
Part 3 Markaad ma bixi karto iCloud?
Mararka qaarkood waxa aad ka heli kartaa in aad iPhone ogolaan ma in aad ka soo dejisan iCloud ah. Waxaa jiri kara sababo kala duwan oo keeni baadi this. Waxay noqon kartaa niyad-jab, sababtoo ah in lagala soo baxo iCloud waxay ka caawisaa in syncing fudud ee files iyada oo qalab kala duwan Apple.
Ka dib waxaa la tallaabooyinka in la raaco si aafadan la tacaali.
1. Mararka qaarkood, marka aad iPhone aan la casriyeeyay si version ugu dambeeyay ama firmware, waxaad la kulmi karaan arrintan. Haddaba waxaa hal dhibic si ay u hubiyaan update ugu dambeeyay firmware oo laga heli karo oo ay isku sameeyaan. Marka aad updated, isku day oo kala soo bixi mar kale iyo dhibaatada xallin waa in.
2. Haddii doorasho kor ku yaal aanu ka shaqeeya, isku dayi iyo hay badhanka guriga oo ay la socoto batoonka isku mar ilaa logo Apple kacdo. Tani waa dib adag oo mararka qaar hagaajin karaa arrinta.
3. Ugu dambeyntii, hubi in aad hubiso in aad ku xidhan yihiin internet-ka.
Qeybta 4 Maxaad iCloud Photos Kanu sow ma aha syncing?
Haddii aad karti auto gurmad, sawiro, waa in si toos ah u hagaagsan in server iCloud ah. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood u hagaagsan waxaa laga yaabaa in la joojiyo sababo kala duwan. Waxaa laga yaabaa in la sameeyo gacanta ama aad ordo ka mid ah meel lagu kaydiyo. Ka dib waa tallaabooyinka loo raaco ee wax looga qabanayo arrintan
1. Tag goobaha ka dibna ku biiro iCloud. Under iCloud, guji sawiro.
2. Check haddii webigu sawir aan u rogmatay on. Haddii ay ku saabsan, waxa dami ka dibna riix on tirtirto.
3. Hadda, ku noqon il sawir aan mar kale.
4. Markii ugu soo socota aad riix sawiro, ay tahay in la si toos ah taageeray in aad iCloud.
Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad sameeyo dib adag telefoonka adiga oo riixaya muhiimka ah ee guriga iyo awood wada ilaa logo Apple kacdo. Tani safaysaa dhibaato ku meel gaar ah, haddii ay jiraan.
Sidoo kale, hubi specie kaydinta laga heli karaa in aad xisaabta iCloud. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in iCloud kaliya qabaneysa ugu danbeeyay ee 1000 sawiro ka durduri sawir aad
Qeybta 5 Maxaad iCloud ayan soo celin kara kaabta The?
Mararka qaarkood, waxaad ka heli doontaa in inkastoo ay gurmad ah, iCloud laga yaabaa in aanay u soo celin awood. Xaaladaha noocaas ah, waxaad mar kale u baahan doontaa inaad qabato tallaabooyinka kala duwan. Waxa ay noqon kartaa qaladka ku meel gaar ah ama dhibaatooyinka ka jira software.
1. Waa in aad doorato dib adag ee aad telefoonka adigoo riixaya badhanka guriga iyo awood isku mar.
2. Marka labaad, waxaad isku dayi kartaa inaad kala soo baxdo firmware ugu danbeeyay ee aad iPhone iyo in la hubiyo in aad qabto warbixintii ugu danbaysay. Tan waxaa laga yaabaa caawin sidoo.
3. Isku day xiriiriyaan iPhone in Lugood iyo arko haddii doorasho hab dib u soo kabashada helno. Ha Lugood u soo kabsado aad iPhone ka dibna isku day in aad soo celiyo iyo gurmad.
Kuwani waa qaar ka mid ah arrimaha guud food saaray dadka isticmaala iPhone oo la xiriira u hagaagsan iCloud. Iyadoo dhibcood, waa in aad awood u maareeyo hab oo waxbaridda ku noqon.
> Resource > iCloud > Sida loo dayactir Common iCloud nidaameed Arrimaha?